Ngaba Ulivavanye iphulo lakho lakutshanje? | Martech Zone
Ngaba Ulivavanye iphulo lakho lakutshanje?
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 7, 2011 NgoLwesihlanu, Matshi 1, 2013 Douglas Karr
Ndifumene i-imeyile entle evela kwiZona ndawo ziBalaseleyo zokuThenga namhlanje. I-imeyile eyilelwe kakuhle yayinemifanekiso ebukekayo enikezela ngokuqinileyo. Isithembiso esinye esabamba iliso lam yayiliKhadi le-SD ye-16Gb ye- $ 24.99.
Ndicofe ikhonkco ndaza ndacelwa ukuba ndingene. Ndizamile ukungena kwaye emva koko yasilela. Ndivavanye izikhangeli ezi-2, ndazama inombolo yam yeakhawunti kunye nedilesi ye-imeyile… kwaye andinakukwazi nokufumana iphasiwedi. Ndikhalaze kuTwitter kwaye @Coral_BestBuy uzame ukundinceda. Ucacisile ukuba bendingena kwi-Best Buy- hayi iZone Reward, efuna ukuba ndibhalise kwi-Best Buy nangona sele ndinayo i-Akhawunti yoMvuzo.
Ndiye ndabhalisa ke. Kwinqanaba lenkqubo yobhaliso, kuye kwafuneka ndingenise inombolo yam yeNqanaba loMvuzo-ndicinga ukuba ndiza kudibanisa iiakhawunti ezimbini. Nje ukuba ndiyingenise loo nto, iphepha lihlaziyekile ngenani eliqaqanjisiweyo. Akukho myalezo wemposiso. Andikwazi ukuqhubela phambili okanye ndibuyele kwesona sibonelelo. Ndincamile.
Uninzi lwabantu ngeluyekile kudala ngaphambi kokuba ndenze, kodwa bendifuna ukubona ukuba kunzima kangakanani. Ingxaki yokwenyani kukuba iqela le-imeyile mhlawumbi lifumana iziphumo ezothusayo zomkhankaso ngoku… nangona ingxaki ilele kwiwebhu. Ukufuna ukuba umntu ahambe ngamanyathelo amaninzi ngokuqinisekileyo kuya kuphazamisa nawuphi na umthengi.
Lonke inyathelo elongezelelweyo kwinkqubo lizakulahla uguquko lwakho ngama-50%. Ndenza elo nani phezulu, kodwa ndiqinisekile ukuba ipesenti yokwenyani imbi kakhulu. Kuya kufuneka unikeze umboleki wakho ngeendlela ezilula, eziziingqondi ekuguqulweni ukuze wandise iziphumo zomkhankaso. Ukufuna ubhaliso, ubhaliso kwiinkqubo ezi-2, ukudida umsebenzisi…. konke oku kukhokelela Ukulahlwa kwinqwelo othengela kuyo.
Ndigqibele nini ukubhalisa kwindawo yakho yedemo, ukhuphelo, okanye uvavanyo lokuthenga? Ndizama ukuyenza ngalo lonke ixesha kwaye ndifumana iimpazamo ezoyikekayo. Ngapha koko, xa ndazisa i-imeyile yokungena, bendinekhonkco lokurhuma kwindawo yam eyalatha kwiphepha elingalunganga! Yhu!
tags: uvavanyo lomkhankasoemailUvavanyo lwe-imeyileuvavanyo
Iindlela ezine zoNxibelelwano eziBalaseleyo kwiiNdlela zokuQalisa iTekhnoloji
Ukuzenzekelayo nge-imeyile ngeWordPress kunye neProjekthi yam yePhulo